Kenya oo soo ceshatay danjiraheeda ku sugan Muqdisho kuna amartay safiirka Soomaaliya in uu dalka ka baxo – Walaal24 Newss
February 16, 2019	2	By walaal24
Dowladda Kenya ayaa dib u soo ceshatay danjiraheeda ku sugan Muqdisho iyadoo oo ku andacoonaya in la xaraashayo saliidda iyo gaasta ee biyaha badda ah ee lagu muransan yahay ee Badweynta Hindiya.
Nairobi ayaa sidoo kale amar ku siisay safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Mohamoud Ahmed Nurto in uu dalka ka baxo.
Sida laga soo xigtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya PS Macharia Kamau, ayaa bandhiga shidaal ee lagu sameeyay London todobaadkii hore.
Mr Kamau ayaa sheegay in safiirka Kenya ee Lt-Gen (Rtd) Lucas Tumbo loogu yeeray Nairobi si loogu helo wadatashi deg-deg ah.
“Farxad aan la taaban Karin iyo mamnuucidda sharci-darrada ah ee khayraadka Kenya maaha mid aan la soo gudbin karin waana ficil kufsi ficil ah oo ka dhan ah dadka Kenya iyo khayraadkooda”. ayuu yiri Macharia Kamau
“Tacsigaan iyo dulqaadkani waa mid u qalma, waana la dabooli doonaa iyada oo la isweydiin doono diidmada iyo dib-u-dhicinta dhammaan Kenyaanka iyo sidoo kale dhamaan dadka dhaca sameeya ee aaminsan ilaalinta sharciga caalamiga iyo amarka iyo xalinta nabadda iyo sharciga ee khilaafaadka,” sidaas ayuu yiri markale wasirka arimaha dibada ee Kenya.
Kenya iyo Soomaaliya ayaa ka dhaxeeya kiis muran ah oo xaduud badeed ka socda Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda.
Soomaliya waxay ku doodaysaa in lagu soo xadgudbay badeeda, waana dood u dhexeeysa labada dal Kenya iyo Soomaaliyaay, dhanka kale Kenya ayaa ku doodday in tani ay tahay badeeda, sidoo kale saameyn karto xudduudeeda badda ay la leedahay Tansaaniya.
Urur Goboleedka IGAD oo taageeray baaqii ka soo yeeray Midowga Afrika ee daynta Cafinta Somaliya
Waxbarashada Iskuulada Soomaaliya oo Habka cusub ka bilaabanayo bishan Agosto
Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya oo sheegay in meel wanaagsan uu marayo xiriirka ay la leeyihiin Soomaaliya
Shirka wadatashiga diyaarinta hanaanka Qaran ee dib u heshiisiinta oo ka furmay Hotel Royal
Dowlada Iran oo lagu eedeyay isku day weerar oo ka dhan ah markab Ingriisku leeyahay
Maxkamad ku taalo Mareykanka oo xukun ku riday Nin kornayl hore ka ahaa Soomaaliya